NY HETSIKA NOKARAKARAIN’IZY IREO
Ireo mpianatry ny JCM notronin'ireo Japoney (sary : JCM)
Anisan’ny taranja manana ny ho aviny mamirapiratra tokoa eto Madagasikara ary efa manomboka mahaliana ny mpianatra Malagasy maro amin’izao fotoana ny fianarana ny teny japoney. Iray amin’ireo toeram-pampianarana mampiroborobo ny fampianarana izany teny izany eto amintsika ny JCM na Japanese Club Manorintsoa eny Ampasamadinika ary tantanan’ny Sensei Rakotomalala Gérard.
Vao tsy ela akory izay dia nanatanteraka hetsika ara-koltoraly teny amin’ny Espace LeMoon Stone eny Iavoloha ny mpitantana sy ireo mpianatra ao amin’ny JCM. Io no hetsika voalohany nataon’izy ireo tamin’ity taona ity, izay nahitana fahombiazana tanteraka.
Nahavariana ny maro ny “cosplay”
Ity hetsika ara-koltoraly ity dia nataon’ny JCM indrindra ifampizarana ny kanto sy ny koltora Japoney sy Malagasy ary hitadiavana vola hampiroboroboana ny toeram-pianarana ihany koa. Tao anatin’izany no nahitana ny fiangalian’ireo mpianatra ny hira amin’ny teny japoney sy Malagasy sy ny dihy japoney ary koa ny fampisehoana ny “cosplay”, izay tena nahavariana tokoa. Nandray anjara mavitrika tamin’ny hira teny an-tsehatra ihany koa ireo Japoney tonga nanatrika ny lanonana.
Manan-talenta tokoa ireto mpianatry ny JCM ireto (sary : JCM)
Olo-manan-kaja maro no tonga nanome voninahitra ity lanonana ity, anisan’ireny ny Attaché Culturel-n’ny AmbasadyJaponey eto Madagasikara, Kawakita mivady sy Rtoa Chiaki, tompon’andraikitra iray eo anivon’ny Ambasady Japoney ary ny solotenan’ny JICA, Atoa Miwa.
Santatra ambavarano ihany ity hetsika nokarakarain’ny JCM ity fa ny manetsabe mbola ho avy. Afaka manantena isika fa hisy hetsika iray goavana ihany koa amin’ity taona ity,izay hatao any amin’ny tapatapaky ny taona any.
Manan-talenta toy izany koa ny mpampianatra ( mijoro, manao lobaka manga) - ( sary : JCM)
Namokatra olona maro
Ny taona 1995 no niorina ny JCM ary Rakotomalala Gérard sy ny Japoney iray antsoina hoe Takamichi Sato no niara-nanorina azy. Ny antony dia noho ny fitiavan’ny mpanorina azy ny koltora japoney sy hampiroboroboana izany eto an-toerana. Tany am-boalohany dia mbola vitsy ihany no liana tamin’ny fampianarana ny teny Japoney satria dia 13 mianadahy monja ny mpianatry ny JCM. Tafakatra avo folo heny tamin’ny mpianatra tany am-piandohana nympianatra ao aminy ankehitriny ary andiany maro no efa navaokan’ny JCM. Betsaka amin’ireo mpianatra navoakan’ity toeram-pampianarana ity no mitana andraikitra ambony amin’izao fotoana izao na eto an-toerana izany na any ivelany, indrindra fa any Japon.
Marihina fampianatra miisa 15 avy ao amin’ny JCM no nahazo ny diplaoma JLPT na Japanese Language Proficiency Test, diplaoma iraisam-pirenena tamin’ity taona 2014 ity.
Tsy mifidy taona ny fianarana ny teny japoney. 12 taona no zandriny indrindra amin’ny mpianatry ny JCM ary 65 taona no zokiny indrindra.
Lahatsoratra : Nanouh
Sary : JCM